Ndị njem agaghị agaghachi azụ- UNWTO, WHO, EU dara, mana ...
Home » Akụkọ Njem Nleta » Njem nleta agaghị agbagha azụ- UNWTO, WHO, EU dara, mana…
Anyị kwesịrị iji wughachi usoro ihe ọhụụ ọhụrụ site na ala elu, brik site na brik. Anyị kwesịrị iwu usoro nke na-adabereghị n'ụkpụrụ nke ndị nwere na ndị enweghị. Njem bụ ihe gbasara mmadụ niile n’ebe niile.
UNWTO na ndi otu mba ndi ozo dara ada anyi ma njem nleta agaghi alaghachi, Dr. Taleb Rifai, onye bubu Odee akwukwo nke UNWTO kwuru.
Ngalaba njem ahụ bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n'ime ngalaba ndị metụtara ya n'ihi COVID-19. O di nwute, gọọmentị ọ bụla na-arụ ọrụ nke aka ya na-eme ihe ha chere kacha mma iji chebe ndị bi na ya. A na-atụ anya nke a ma kwere nghọta.
Ihe anyi choro bu sistemu ohuru ohuru, onu ahia, ngosiputara aka na nha anya, nihi na odighi mkpa ka obodo niile no n’onwe ha.
Dr. Taleb Rifai bụ onye odeakwụkwọ ukwu abụọ nke World Tourism Organisation (UNWTO). Taa, Dr. Rifai na-eyi ọtụtụ okpu, gụnyere dị ka bọọdụ na ngalaba-onye guzobere World Tourism Network (WTN).
Rifai kwuru, sị: “Afọ anọ gara aga, enwere m mkparịta ụka na netwọkụ Victor Jorge Portuguese Workmedia ma jụọ m otu m ga-esi akọwapụta oge dị ugbu a n’oge ahụ, nke gụnyere iyi ọha egwu, BREXIT, na nhoputa nke Onye isi ala US Donald Trump. N'oge ahụ, ọ nweghị onye tụrụ anya na nsogbu COVID na mmetụta ọ ga-enwe na njem na njem njem njem. " Dị ka Rifai buru n'amụma, otu afọ mgbe e mesịrị, ndị njem laghachiri azụ.
Dr. Rifai kọwara taa n'ajụjụ ọnụ ọzọ ya na otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi Portuguese ahụ: "Ekwenyere m na nke a bụ ugbu a oge dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ kpamkpam. Ihe niile ga-agbanwe. Njem nleta agaghị agbagha.
“Taa, anyị agaghị alaghachi azụ, mana anyị ga-amaba n’ime ụwa ọhụrụ, ụkpụrụ ọhụrụ. Ọ nwere ike bụrụ ụwa kacha mma ma na-adigide.
“Ya mere, enwere m ezigbo nchekwube na anyị agaghị alaghachi n'oge ma na-aga n'ihu n'ime mmepe na-adigide karịa - ebe niile.
“Akụkụ njem bụ, n’enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n’ime ngalaba ndị metụtara ya kacha emetụta COVID-19. O di nwute, gọọmentị ọ bụla na-arụ ọrụ nke aka ya na-eme ihe ha chere kacha mma iji chebe ndị bi na ya. A na-atụ anya nke a ma kwere nghọta. Ndụ bụ ihe kachasị mkpa ichegbu onwe gị. Ndị gọọmentị na-eme ike ha niile ichebe ndị obodo ha.
“Mba ọ bụla aghaghi ịhazi omume na usoro ya na ndị agbata obi ya. Agaghị eme ọrụ zuru oke n'onwe gị. N'ezie ọ bụ ikwenye na usoro pere mpe nke ga-amalite site na njedebe gburugburu nke ga-eru ọkwa mba ụwa. Nọgide na-agụ site na na ịpị ỌZỌ.